Fanambarana iraka sy mpikambana ao amin'ny ekipa - Casting Minghe
Minghe Casting Concepts dia manolo-tena amin'ny ezak'izy ireo mba ho orinasa mpamokatra bobongolo sy fanodinana faran'izay tsara sy hajaina indrindra natsangana hatrizay.
Minghe dia manatanteraka ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny kalitao avo lenta, vidiny ambany, fotoana fohy ary Flexibility, izay faritanay momba ny fifaninanana.
Ny tanjonay dia mitaky fahombiazana avo lenta ataon'ireo mpikambana ekipa mahay, miaraka amina andraikitra ara-moraly hanampy ny mpiara-miasa hahatakatra ny fahafaha-manaony. Miara-miasa amin'izany tanjona kendrena izany izahay, miaraka amin'ny fanajana, ny fomba fanao etika ary ny politika.
Ny mpikambana Minghe dia mahatakatra fa ny fiofanana sy ny coaching dia adidin'ny tsirairay ary manolo-tena amin'ny fanatsarana maharitra sy haingana amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana.
Mandroso amin'ny ho avy dia vonona izahay hanova ny zava-drehetra momba ny tenantsika afa-tsy ireo finoana ireo amin'ny tanjontsika.
Mpanambola mpivarotra raharaham-barotra avy any ivelany ary teknisianina maty antoka, David Pan dia nanova ny Minghe Group, ilay orinasa natsangany, avy amin'ny atrikasa kely ho lasa mpitarika manerantany. Manana traikefa amin'ny fandrosoana be izy ary ankoatry ny asany miaraka amin'ny Minghe Group dia nitondra ny fahaizany tamina orinasa maro hafa mahomby. Ao amin'ny Minghe Group izy no tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ny orinasa isan'andro ary koa ny làlana stratejika maharitra.
Ny tetikasa Minghe Casting dia natomboka noho ny fahafantarany ny mety ho famonoana ho faty ary ny fanolorantenany ho lasa mpitarika indostrialy amin'ny filatsahana.
Na eo aza ny maha mpandraharaha mahomby azy dia mbola mahita fotoana hijerena ny fifehezana kalitao sy ny toe-javatra hafa eo amin'ny sehatry ny famoahana die casting izy, manome aingam-panahy tanora mpiasa an-jatony hamolavola ny heviny ary hamorona vahaolana vaovao.
Mpiara-manorina sy filoha lefitra
Nipetraka tao HK nandritra ny 20 taona teo ho eo, niaraka tamin'ny fitantanana ekipa mpamokatra entana betsaka sy traikefa amin'ny varotra tena tsara (Indrindra eo amin'ny sehatry ny Machining CNC), niditra ho mpikambana tao amin'ny vondrona izy tamin'ny taona 2008 tamin'ny naha filoha lefitra sy tale jeneralin'ny sampana Minghe azy.
Talohan'io andraikitra io dia niasa tamin'ny orinasa mpamokatra entana lehibe izy, toa an'i Foxconn, izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tsena Aziatika, ny fampandrosoana ny tamba-jotra. Amin'ny maha-Senior Senior amin'ny indostrian'ny casting die dia niasa tamin'ny mpamokatra fitaovana maty casting china izy ary tompon'antoka tamin'ny tsena aziatika. Tao anatin'izay dimy taona lasa izay dia nahavita fampisehoana mahavariana izy tamin'ny 300% ny tahan'ny fitomboan'ny varotra isan-taona.
Amin'ny maha filoha lefitra ao amin'ny vondrona azy dia i Zhouhanpin no miandraikitra ny tsena any ampitan-tany ary manampy ny filoha hitantana ny asa fitantanana sy hanao consultation ilaina. Amin'ny maha CEO an'ny PTJ azy dia tompon'andraikitra amin'ny Projet Cnc Machining izy.
Talen'ny departemantan'ny varotra ivelany
Michelle Hong dia manana traikefa efa roapolo taona mahery eo amin'ny fitantanana ekipa sy ny fampandrosoana ny vokatra. Lehiben'ny talen'ny fampiroboroboana vokatra ho an'ny mpamokatra elektronika talohan'ny nidirany tao Minghe tamin'ny 2009.
Tamin'ny anjara asany teo aloha dia nifandray indrindra tamin'ny Cnc Machining izy, metaly fanodinkodinam-bola, ary ny famatsiam-bola ho an'ny vokatra toy ny vatan-kazo, fonosana, paompy ary ny bisikileta. Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny famokarana azy dia namolavola programa fanabeazana momba ny faritra manokana izay nampianarina tany amin'ny oniversite eo an-toerana izy nandritra ny taona vitsivitsy, ary ny taona 2013 dia nitarika ny famolavolana tetik'asa famoahana tena maty izy. Mitarika ny departemantan'ny R&D i Michelle koa ankehitriny ary mitantana ny raharaham-bahiny.